အိန္ဒြာ: မြစ်တွေ စီး ထွက်လာတဲ့ အကြောင်း
သူ့မြို့လေးရဲ့ကမ်းနဖူးက အရိုင်းအစိုင်း ကိုင်းပင်တွေကအစ
အစွမ်း ကုန် ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တယ်..။
ဘယ်တော့မှ ထိမ်ဝှက်လို့မရနိုင်တဲ့ အတိတ်ကာလတွေကို..
တစိမ့်စိမ့် နစ်မြုတ်နေတဲ့ သစ္စာတရားတွေကို
သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ လေပြင်းတွေပဲ ထန် ပြခဲ့..
ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ လှိုင်းကြမ်းတွေပဲ ဆင့် ပြခဲ့
မြစ်ဆန်သလောက်တော့ ညစ် နောက်ခဲ့.....။
သူ့ထက်မြစ်ဆန်ပြနေတဲ့...မြစ် အ တု တွေကို..
အစ်မရေ မြစ်ထဲကိုစီးဝင်သွားတယ်ဗျာ.. ပင်လယ်ဆီအရောက်ပေါ့..
ကဗျာထဲကမြစ်ထဲမှာလည်း.......... ......... ........
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ချက်တွေပါလား။ သက်သေပြချက်ကတော့ ရက်စက်တယ်မကြီးရေ။
မြင်တယ် အဲ့ဒီ့မြစ်ကိုမြင်တယ်။ အဲဒီ့မြစ်ထဲက အရာတွေကို မြင်တယ်။ ဆိုလိုချင်တဲ့ အရာတွေ မြင်တယ်။
မကြီး ကျွန်တော်လည်း ပင်လယ်ဆီကို စီးထွက်လိုက်ချင်ပြီ။
မြစ်ရဲ့စီးဆင်းမှုတွေ ဖြစ်တည်မှုတွေ ရပ်တည်ချက်တွေအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရတယ်...လူတွေရဲ့မသိကျွိုးကျွံပြုမှုတွေနဲ့ သဘာဝတရားကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖျက်ဆီးမှုတွေ
ကြောင့် မြစ်တွေလည်းသောင်ထွန်းခဲ့ရပြီကော ညီမရေ..
ဒါပေမယ့် မြစ်တွေက လူတွေထက်ပိုပြီးတာဝန်ကျေတယ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်လယ်ထဲအရောက် စီးဝင်မှုတွေပေးဆဲ ပေးမြဲ...
ကျွန်တော့်ကို တစ်ချိန်က အစ်မပေးဖူးခဲ့တဲ့
ကော်မန့် တစ်ခု ထဲက အတိုင်းပဲအစ်မရေ ...
မြစ်တစ်စင်း စီးဆင်းသွားတဲ့ ဂီတသံကို ကြားလိုက်ရဲ့ ...
"မြစ်တွေ စီး ထွက်လာတဲ့ အကြောင်း"
စိတ်ကူးနဲ့ လှပ အောင်အထပ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပြီး--
လိုချင်တဲ့ စံ တခုကို ဖြစ်တည်စေခဲ့သလို--
ကဗျာ အလှအပ ခြယ်သဖွဲ့စည်းမှုတွေက--
အနုပညာ စံ ကိုဖေါ်ညွှန်းစေတယ်--
This would be the completed brilliant description ofariver..
And I was flowing along with it.
Love your meaningful poem!
They never failed to teach me the linkage between words & lives.. :)
ဒါပေမယ့် မြစ်တွေဟာ ပင်လယ်နားရောက်လေ
အစ်မရေ ခံစားသွားပါတယ်။ ငါးဖောင်ရိုးလေးတွေ ကူးနေတာလည်း မြင်ခဲ့ရ၊ ပြောင်းဆန်မွှေးနံ့ လေးတွေလည်း ရှုရှိုက်ခဲ့ရ၊ သဲသောင်ဝါ၀ါမှာလည်း ခေါင်းအုံးခဲ့ရပါတယ်။ ချီးကျုးရမယ်ဆိုရင်တော့ မသက်ဇင် ပြောသလိုပါပဲ။ ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ စာလုံးပေါင်းလေးတွေရယ်၊ ကြီးအောင်ဝင်ဆိုတာလေးတွေ ပြင်စေချင်တာပါပဲ။ ကြီးကောင်ဝင် ထင်ပါတယ်။ ခင်မင်လေးစားလျက်။
နောက်ပြီးတော့ အစ်မရေ။ နာကျည်းစိတ်ကုန်ရလွန်းလို့.....ပင်လယ်ဆီထွက်လာခဲ့လိုက်ပေါ့.....ဆိုတာကို ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် ဆိုပြီး သုံးလိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမလားလို့ ပါ။ အကြံပေးတာပါ။
ပင်လယ်ဆီထွက်လာခဲ့တဲ့မြစ်က မြို့ကလေးဆီ ပြန်မလှည့်ဘူးလို့ ဘယ်သူလောင်းရဲလို့လဲကွယ်..။
မသွားပါနဲ့လား.. မြို့လေးကိုပဲ ဆက်လက်ထွေးပွေ့ပါလား.. နှမြောတယ်.. မရဘူး.. ပြန်လာခဲ့မြစ်..
အိန္ဒြာပြောတဲ့ မြစ်ရဲ့ ဒဿနကို ခံစားသွားပါတယ် အစ်မရေ...။ မြစ်ကို အသေးစိတ်ဖွဲ့ထားပုံက ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပါပဲ...။ ဧရာဝတီကို လွမ်းလာပြီဗျာ...။ အစ်မလည်း အိမ်ကို လွမ်းနေပြီ ထင်ပါရဲ့...။ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်နေရင်းက သတိယတာနဲ့ အစ်မ ကဗျာဟောင်းလေးတွေ ပြန်ဖွပြီး ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...။ အဲဒီထဲကမှ အိမ်ငါးကဗျာလေးနဲ့ ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ် ခံစားမိပါတယ်...။ အိမ်ထဲက ငါးလေးကို မြစ်ထဲမှာ လွတ်လပ်ပါစေတော့လို့...။
မြစ်အစစ်လေးထဲမှာ ခံစားချက်တွေကို တစိမ့်စိမ့် စိမ်သွားတယ် အစ်မ။
သူ..တွယ်တာ မြတ်နိုး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့
အတုတွေပဲ ပြန်ရလိုက်တဲ့ အချိန်
အသက်မရှိတော့တဲ့ ခန္တာကိုယ် ကို